Vaovao - Amin'ny taona 2026, ny tsenan'ny zavamaniry fisarahan'ny rivotra eran-tany dia hahita fitomboana lehibe
Ny DBMR dia nanampy tatitra vaovao antsoina hoe "Tsena fitaovana fanasarahana ny rivotra", izay misy tabilao angon-drakitra momba ny taona sy ny vinavina. Ireo tabilao angon-drakitra ireo dia aseho amin'ny alàlan'ny "chat sy graphs" miparitaka manerana ny pejy ary mora azo ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany. Ny tatitra momba ny fikarohana momba ny tsenan'ny fanasarahana ny rivotra dia manome famakafakana lehibe momba ny toetry ny tsenan'ny mpanamboatra fitaovana fanasarahana rivotra, ao anatin'izany ny haben'ny tsena, ny fitomboana, ny fizarana, ny fironana ary ny firafitry ny vidin'ny indostria. Rehefa manangana ity tsena eran-tany ity dia tokony hifantoka amin'ny karazana tsena, ny haavon'ny fandaminana, ny fisian'ny eo an-toerana, ny karazana fikambanana mpampiasa farany, ary ny fisian'ny tatitra momba ny tsenan'ny fanasarahana rivotra any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eropa, Azia Pasifika ary Afovoany Atsinanana. ary Afrika. Ny fitomboan'ny tsenan'ny fitaovana fisarahana amin'ny rivotra dia tarihin'ny fitomboan'ny fandaniana R&D eran-tany, fa ny scenario COVID farany sy ny fihenan'ny toekarena dia nanova ny dinamika tanteraka ny tsena.
Ny tatitra momba ny tsenan'ny tsenan'ny fisarahan'ny rivotra dia manome loka ho an'ny mpanjifa ny vokatra tsara indrindra, ary ny tatitra dia novokarina tamin'ny fampiasana fomba mitambatra sy ny teknolojia farany. Miaraka amin'ity tatitra momba ny tsena ity dia mora kokoa ny mametraka sy manatsara ny dingana tsirairay amin'ny tsingerin'ny fiainana indostrialy, ao anatin'izany ny fandraisana anjara, ny fahazoana, ny fitazonana ary ny vola. Ny tatitra momba ny tsena dia nanao famakafakana betsaka momba ny firafitry ny tsena ary nanombantombana ny fizarana tsena isan-karazany sy ny ampahany amin'ny indostria. Tsy lazaina intsony, ny tabilao sasany dia nampiasaina tamin'ny fomba mahomby tamin'ny tatitra momba ny orinasa fanasarahana ny rivotra mba hanehoana ny zava-misy sy ny angona amin'ny fomba marina.
Anisan'ireo mpifaninana lehibe miasa amin'izao fotoana izao ao amin'ny tsenan'ny orinasa fanasarahana rivotra, dia vitsy ny Air Liquide (France), Linde (Irlandy), Praxair Technology Co., Ltd. (UK), Air Products Co., Ltd. (Etazonia), Messer Group Co., Ltd. (Alemana), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japon), Uig (Etazonia), Enerflex Co., Ltd. (Kanada), Technex, Astim (Europe), Bd | Sensors GmbH (Alemana), Toro Equipment (Eoropeana), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Europe), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Alemana), Instrument & Supply, Inc. (Etazonia) ), Jbi Water and Wastewater (Etazonia), H2Flow Equipment Inc (Canada), Haba Tuotteet (Etazonia), Eco-Tech, Inc. (Etazonia), Rcbc Global Inc (Alemaina) ary orinasa hafa.
Ny tsenan'ny fitaovana fisarahana amin'ny rivotra eran-tany dia antenaina hitombo avy amin'ny sandan'ny $ 3.74 lavitrisa voalohany amin'ny taona 2018 ka hatramin'ny $ 5.96 lavitrisa amin'ny 2026, miaraka amin'ny taham-pitomboana isan-taona 6% mandritra ny vanim-potoana vinavina 2019-2026. Ny fitomboan'ny vidin'ny tsena dia azo ampifandraisina amin'ny fitomboan'ny fangatahana vokatra photovoltaic sy fantsona fampisehoana plasma.
Mba hahatakarana indrindra ny fihetsehan'ny tsenan'ny fitaovana fanasarahana ny rivotra eran'izao tontolo izao, dia nandinika ny tsenan'ny fitaovana fanasarahana rivotra eran-tany any amin'ny faritra lehibe eran'izao tontolo izao izahay.
Ny areti-mifindra COVID-19 dia niteraka olana teo amin'ny fantsom-pamokarana indostrialy manontolo, ny fantsona fivarotana ary ny hetsika rojo famatsiana. Nametraka fanerena ara-tetibola tsy mbola nisy toy izany tamin'ny fandaniam-bolan'ny orinasa nataon'ireo mpitarika indostrialy izany. Izany dia mampitombo ny fangatahana famakafakana fahafahana, fahalalana momba ny fironana amin'ny vidiny ary ny vokatra azo amin'ny fifaninanana. Ampiasao ny ekipan'ny DBMR hamorona fantsona fivarotana vaovao ary hibodo tsena vaovao tsy fantatra taloha. Manampy ny mpanjifany hivoatra amin'ireo tsena tsy azo antoka ireo ny DBMR.
Fotoana fandefasana: Nov-22-2021